ဒေါင်းတမာန်: 03/21/2010 - 03/28/2010
ဒီကဗျာဖတ်ပြီးရင်ထဲ မကောင်းလွန်းလို့(စစ်ဓါးပြသန်းရွှေတို့ များ ပြည်သူ့ လုပ်စာစား ဇိတ်ကျ နေကြရဲ့ )
ကျနော့ကို အမေ မွေးတာ..
ဒီ အမှိုက်ပုံ နေရာပေါ့
ယင်တလောင်းလောင်း၊ ကြွက်များ အောင်း
အနံ့ ထောင်းထောင်း။ စွန့် ပစ် အဟောင်း..
ထမင်းတစလောင်း ဟင်း တခွက်ကောင်း..
ရွေ့ ပြောင်းအလုပ်သမား၏ တဲ..
မုံ့ပဲ သွားရည်စာဘယ်အရာ ကျနော်မသိ
အဆာပြေ အမှည့်လွန် ဌက်ပျောသီးတစ်လုံး
ကျနော့အတွက်ဆို ဒါ နတ်သုဒ္ဓါ
မျက်နှာ နှပ်ချေး သလဲ..
ကျနော်တို့ အတွက် မဟုတ်ပါဖူး..
ခေါ်တဲ့အခါ ထူးတတ်ရင် အလုပ်ဖြစ်တယ်.
ပုလင်းဟောင်း.ဖျော်ရည် CAN ဗူး.
ထမင်းဝတယ်။ လည်ဖို့ ဘဲလိုတယ်။
ကျနော် အမှိုက်ပုံပေါ်တက်နေတာက ဘေးကင်းပါတယ်။
ဒီမှာဘဲ ကြီး..ဒီမှာဘဲ နီး..
အမေ ကြွေးတဲ့ သစ်ခေါက်မြစ်ဖု..
ချင်း. ဆနွင်း ခွေးသေးပန်းရွက်
မြန်မာပြည်က လာတဲ့ . သွေးဆေး၊ လျှက်ဆား
ကျနော်တို့ ရဲ့ ကိုးဆဲ့ခြောက်ပါးရောဂါ..
ကျနော့ ကလေးတွေ မွေးလာရင်.
သူတို့ လည်း အမှိုက်ပုံပေါ် မွေးမှာပေါ့..
ဒီမှာတော့ ဒီလိုဘဲ မွေးကြတာဘဲ
သူတို့ လည်း အခြေအနေမဲ့ ..
ဆင်းရဲသော ဒုက္ခ..ငတ်ပြတ်တဲ့ ဒုက္ခ
မသဒ္ဓါ ( ၃။ ၉။ ၂၀၁၀)
စာကို ပုတ်လောက် ရေးပြတောင်မသိ
အနာဂတ် ဆိုတာ ဘယ်နေရာမှာ ရှိမှန်း မသိသော ကလေးများအတွက်..ကြေကွဲစွာဖြင့်
Posted by ဒေါင်းတမာန် at Friday, March 26, 20100comments
ကျွန်တော် အောင်သိန်းလင်း ငရိုင်းကောင်လေးကို ကို မဲပေးပါ
(a person who has lied or who lies repeatedly ) လူပုဂ္ဂိုလ်တဦး လိမ်လျက်လိမ်ရင်း ဘယ်နေရာရောက်နေမှန်းမသိသောသူ။
Posted by ဒေါင်းတမာန် at Sunday, March 21, 20100comments
( Click )ကိုဝဏ္ဏ၂၃ အင်တာနက်စာမျက်နှာမှတောင်းယူတင်ပြပါသည်)
သောက်ခွက်ရုပ်ပုံကို ကြည်ပြီး စိတ် ကောင်းမကောင်းဆိုတာ ပရိတ်သတ်ကြီး သုံးသပ်ကြပေတော့။
သန်းရွှေ နဲ့မောင်အေး ၂ယောက်ပေါင်းမွေးထုတ်လိုက်တဲ့ သား အောင်သိန်းလင်း ၊သန်းရွှေ မောင်အေး အပါအ၀င် န အ ဖ လူတော်တော်များဟာ ကျနော်တို့ အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ ဂုတ်ကြားခွေးလောက်တောင် အဆင့်မရှိ၊ အသိဥာဏ်မရှိ ၊အရှက်မရှိတဲ့ ၊လူမိုက်ရိုင်း၊ လူရမ်းကားတွေပါ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ အတော်ယုတ်တဲ့လူတွေဗျား။ တိုးတက်နေတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ ခင်ဗျားတို့စိတ်ဓာတ်တွေပြင်ဖို့ကောင်းနေပြီ ၊ သန်းရွှေ မောင်အေ စစ်တပ်ကြီးကတော့ ကြေညာလိုက်တာ မပြောနဲ့တော့ အမျိုးဂုဏ် ဇာတိဂုဏ်မြင့်မားရေး တဲ့။
▼ Mar 21 - Mar 28 (3)
ဒီကဗျာဖတ်ပြီးရင်ထဲ မကောင်းလွန်းလို့(စစ်ဓါးပြသန်း...
ကျွန်တော် အောင်သိန်းလင်း ငရိုင်းကောင်လေးကို ကို မဲ...